Taxtụ Mmanya Wine Na-enweghị Nnochite Anya Ndị njem nleta ma ọ bụ ndị njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Taxtụ Mmanya Wine Na-enweghị Nnochite Anya Ndị njem nleta ma ọ bụ ndị njem
Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Ben Aneff na ụtụ isi mmanya
Ejiri iwu mbubata na mmanya si n'ọtụtụ mba Europe site n'aka onye isi ala Trump nke na-emetụta ala maka njem na njem metụtara ọrụ na njem.
COVID-19 agbaghawo onye ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla; Agbanyeghị, omume gọọmentị na-akụ ndị na-eri nri ihe otiti ugboro ugboro.
Ndị mmụọ mmụọ distrikti, ndị otu ụlọ ọrụ na-echegbu onwe ha nke ukwuu n'ọchịchọ Trump nwere itinye ụtụ isi na mmanya.
Wtù Wine Trade Alliance nke United States edoziwo njikọta nke ndị isi nri na ndị ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ịmanye gọọmentị Biden ịhapụ echiche nke ụtụ isi ọzọ na mbubata mmanya.
Tụ isi n'ihe ndị anyị hụrụ n'anya ma chọọ bụ ndị na-ewu ewu. Abịa na ọnụ ahịa mmanya na-aba ụba n'ihi ụtụ isi mmanya, ọ ga-abụ na anyị na-ama ọkwa. Ikekwe ụlọ ọrụ mmanya a na-ebubata ghọrọ tarifu elebara anya n'oge gọọmentị gara aga n'ihi na ndị ibe bi na White House họọrọ Coke karịa mmanya na-egbu maramara ma ọ bụ Riesling; Ọ bụrụ na ihe ọ beụ beụ ọ beenụ beenụ dị iche, ụtụ nwere ike ịdaba na mmiri ma ọ bụ ụlọ ọrụ ihe ọ softụ softụ dị nro kama.
Lọ ọrụ nke Onye Nnọchiteanya Azụmaahịa US (USTR) nyere iwu tarifu 25 pasent na ọtụtụ mmanya ndị si na France, Germany, Spain, na UK bido na Ọktọba 2019 iji megwara maka esemokwu enyemaka ụgbọelu na-adị ogologo oge n'etiti US na European Union metụtara Boeing (Chicago) na Airbus (Leiden, Netherlands). Bulite tarifu site na 25 pasent na-eme atụmatụ iji mee ka ọnụ ahịa mkpụrụ vaịn nke US na-abawanye site na ọkara nke 2.6 pasent, yana ọnụahịa ndị na-emepụta mmanya mmanya karama bụ 1.1. pasent na mba ndị ezubere iche. Tarifu na aru oru ugbua.
United States bụ onye na-ebubata mmanya ndị France nke kachasị na gọọmentị ndị isi nke United States tụpụtara ụtụ isi nke 100 pasent na French Champagne na mmanya ndị ọzọ na-egbukepụ egbukepụ. Onye isi ala Trump bụ onye na-ahụ ọnụego tarifụ n'agbanyeghị na ndị na-ahụ maka akụ na ụba na-ele ụdị ụtụ isi a dịka ibu na ndị na-ebubata ngwaahịa na-enyefe ndị ahịa n'ụdị ọnụahịa dị elu na ndekọ ego. Ọ dabara nke ọma na ndị na-agba mmanya na French, a naghị etinye ụtụ isi a; Agbanyeghị, ọnụego tarifu 25 nke ugbua na mmanya Europe nwere ike ịba ụba ma na-atụle ugbu a na Washington.
Airgbọ elu vs. Mkpụrụ vaịn
Kọmitii Mmụọ Mmụọ Distilled, otu ụlọ ọrụ, nwere nnukwu nsogbu na mmasị gọọmentị Trump na-etinye ụtụ isi na mmanya, na-ajụ ajụjụ dabara adaba nke ịdọrọ ụlọ ọrụ ile ọbịa ile anya na esemokwu ahia na-enweghị njikọ.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara na ewepu mmanya ndị Italiantali na nke na-egbukepụ egbukepụ na listi a kụrụ ka a na-agbanye ya mmanya ndị a na-agbanye n'ime arịa ndị pere mpe karịa lita abụọ yana mmanya na-aba n'anya n'okpuru 14 pasent. Ọ bụrụ na ezigara mmanya na nnukwu ihe ma ọ bụ buru ibu ma nwee ABV dị elu… akara ha.
Na 2020, onye nnọchi anya azụmaahịa nke United States (USTR) kpebiri ịlaghachi na ụlọ ọrụ mmanya ma jiri ụtụ isi ọzọ tinye ya. N'ihi gịnị? Esemokwu Airbus akwụsịla. Ọchịchị Trump enweghị obi ụtọ naanị imebi ụfọdụ mba na ụfọdụ mmanya, ugbu a ha chọrọ iti ndị niile so na European Union ihe ma weta ụdị mmanya niile n'okpuru ọnụahịa tarifu (chefuo ngwugwu ngwugwu ma ọ bụ mmanya na-aba n'anya).
Obi anaghị adị ndị na-akwado ụlọ ọrụ mmanya mma ma ha na-eguzo na mmanya mmanya ha, megidere atụmatụ ahụ na-amanye ndị Trumpster ịlaghachi azụ. Agbanyeghị na ndị na-akwado ọnụahịa tarifu na-apụ ugbu a na White House, ha hapụrụ iyi egwu nke ịgbasawanye tarifu na tebụl na iwu na-echere na-achọ ịgbatị tarifu na mmanya niile nke Europe yana ohere ịlaghachi na 100 pasent chọrọ.
Tariffs rụpụtara na ọnụahịa ndị ahịa dị elu
Kedu ihe ọnụahịa na-eme ị consumptionụ mmanya? Gingkwụ ụgwọ mgbakwunye 25 pasent na mmanya ndị Europe na ahịa ndị na-eche ọnụ ahịa ugbu a na-ebelata ọchịchọ na mba ndị nọ na Trump hitlist nwetara nrịgo 32 pasent na ego ha nwetara. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-emepụta mba ofesi belata ọnụahịa ha ma kesara ụfọdụ ndị na-ebubata ya US ụfọdụ ihe mgbu ahụ bụ, na njedebe nke ụbọchị, na-ahụ maka ịkwụ ụtụ. Nsonaazụ nke ọnọdụ mmanya mmanya a niile? Mmanya sitere na France, Germany, Spain, na United Kingdom dị obere karịa afọ gara aga na-atụ aro na agbanweela na ngwakọta ngwaahịa maka mmanya ndị bara uru dị ala na-edebe mmanya kacha mma, dị oke ọnụ karịa ahịa US.
Anya mmiri. Mmanya
COVID-19 agbaghawo onye ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla; Agbanyeghị, ebuputela isi na ihe na-agbawa obi megide ụlọ ọrụ ndị njem, ebe a na-eti ụlọ nri nri ugboro ugboro site na mbido / nkwụsị / ịga / enweghị ọrụ nke gọọmentị.
N'ihi ọrịa a nke bidoro na mbido afọ 2020, ụlọ ọrụ ndị njem na-akwụsị. N'ihi usoro nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịkpachara anya na ebe ọha na eze, ndị na-eri nri anaghị eri obere nri na afọ iri na ụma nke ndị na-eri nri n'ụlọ nri na US bụ 64.68 pasent dị ka nke Jenụwarị 13, 2021 (statista.com). Na mkpokọta, ụlọ oriri na ọ restaurantụ totalụ zuru oke na ahịa nri na-ada ijeri $ 240 site na ọkwa a tụrụ anya na 2020 na nke a gụnyere ụkọ ahịa na-eri nri na ebe a na-a drinkingụ ihe ọ plusụ ,ụ, yana mbelata oke mmefu na arụmọrụ ọrụ nri na mpaghara dịka ebe obibi, nka / ntụrụndụ / ntụrụndụ , mmuta, ahu ike na mgbere (restaurant.org).
Alcohollọ ọrụ na-aba n'anya na US tụfuru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ 93,000 na ụgwọ ọrụ ijeri $ 3.8. Mgbe ndị isi ọchịchị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị enweghị ike ịhụ ihe kpatara mmụba nke ọrịa COVID na ọnwụ, ha boro mgbasa ahụ na ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ụlọ mmanya. Na-enweghị nnyocha na sayensị iji chọpụta nrụpụta ọrụ na izi ezi nke ihe ha kwuru, ụlọ nri na ụlọ mmanya ka a na-akpali ha gaa na nke mbụ na ndepụta AH DO, aga ewetala ụlọ ọrụ ahụ ikpere, ka Ben Aneff, Onye isi ala nke US Wine Trade Alliance si kwuo. na Onye isi nchịkwa, Tribeca Wine Merchants na New York.
Ihe mgbochi megide ụlọ oriri na ọ barsụ restaurantsụ na ụlọ ahịa mmanya emetụtawo ndị na-ekesa mmanya na US na-akpata ọnwụ nke pasent 50-60 nke ahịa ha. Site na ịkwụ ụgwọ na ụtụ isi nke ụtụ isi, ohere pere mpe maka ọtụtụ wineries ga-adị ndụ na asọmpi asọmpi. Aneff hụrụ na ọnụahịa tarifu ahụ nwere ike bụrụ "egwu kachasị egwu na ụlọ ọrụ mmanya ebe amachibidoro."
Aneff nwere nchekwube na gọọmentị Biden ga-enyocha usoro tarifu dị ugbu a wee pụta na-akwado ụlọ ọrụ mmanya n'ihi na azụmaahịa nke ụtụ ahụ abụghị nnukwu ụlọ ọrụ dịka Boeing nwere okpu ahịa nke $ 120 ma na-ewute ndị na-emepụta mmanya na France na Jamanị.
US Mmanya Azụmahịa Ahịa
Na-agwa ndị tarifu tarifu na mmanya dị na nke na-abịa WorldTourismNetwork. soro mkparịta ụka ZOOM na Dr. Elinor Garely, eTN Investigating Reporter, bụ Ben Aneff, Onye isi oche nke US Wine Trade Alliance (USWTA) na Onye Njikọ Onye Mmekọ nke ndị ahịa Wine Tribeca na New York City. Tupu ịmalite njikọ ahụ, Aneff tinyere aka na ịkwado National Association of Wine Retailers, na-eduzi mkparịta ụka banyere ụtụ isi na ịgba akaebe na mmetụta nke ụtụ isi n'ihu International Trade Commission.
Aneff gara Texas Tech University ebe ọ bụ onye isi egwu (1999-2004) wee nata nzere Master na Music si Ithaca College (2004-2006). Njikọ ya na mmanya malitere na Berlin, Germany, ebe ọ bụ Onye Na-enye Ndụmọdụ Ọma. Na 2009, ọ ghọrọ Director nke Ahịa na Tribeca Wine Merchants, bụrụ Onye Nlekọta Njikwa na 2014.
The Alliance achikota a mmekota nke chefs na restauranteurs ịmanye ndị Biden ochichi hapụ echiche nke ọzọ tarifu na mmanya mbubata. Ndị ọkachamara nri na ihe ọ beụverageụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ zaghachiri mgbalị ahụ site na izipu akwụkwọ ozi karịrị 2000 sitere na steeti 50 na-arịọ maka iwepụ tarifu.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ụtụ isi mmanya, kpọtụrụ: Ebe nrụọrụ weebụ USwinetradealliance.org